१० अर्ब २ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा चुडामणि शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर | Capital Khabar ::
गृह Breaking News १० अर्ब २ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा चुडामणि शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा...
१० अर्ब २ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा चुडामणि शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौँ साउन,१ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार ८२४ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
कर फर्छ्यौट आयोग २०७१ का अध्यक्ष लुम्बध्वज महत एवं सदस्यद्वय शर्मा र उमेश ढकालविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर अदालतका रजिष्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
अख्तियारले गत १९ गते शर्मालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। शर्मा पक्राउ परे लगत्तै महत र ढकाल भने फरार भएका थिए। उनीहरुको नाममा अख्तियारले वारेन्ट नै जारी गरेको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गठन गरेको आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँ कर फर्छ्यौट गर्दै २१ अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीलाई फिर्ता दिएको थियो। सरकारी अडिट गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसरी छुट दिनु गैरकानुनी भन्दै प्रश्न उठाएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो।
महालेखाले आफ्नो ५४ औँ प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणले तिरेको भ्याटसमेत व्यवसायीलाई फिर्ता दिएको भन्दै आयोग पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेको थियो। निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई भारी मात्रामा कर छुट दिई सरकारी संस्थानलाई नाम मात्रको छुट दिएको पनि महालेखाले जनाएको थियो।
अख्तियारले आयोगको प्रतिवेदन माग गर्दा शर्माले सुरुमा उपलब्ध गराउन मानेका थिएनन्। त्यसपछि उनले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने आशंका भएपछि अख्तियारले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो। बिहीबारनै मुद्दा दायरका लागि शर्मालाई विशेष अदालत पुर्‍याइएकोमा समय अभावका कारण पछि सरेको थियो।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाई रहेको कारण उक्त दिन पनि मुद्दा दायर हुन सकेन। सोही कारण अख्तियारले आइतबार कार्यालय खुल्ने बित्तिकै मुद्दा दायर गरेको हो।
अघिल्लो लेखमाअसार सकियो रोपाइँ सकिएन
अर्को लेखमाफेरी एनसेलमाथि सरकारको आर्को ‘आक्रमक’ !
​चुडामणि शर्माको घरमा बम विस्फोट
सर्वोच्चद्वारा चुडामणि शर्मालाई थुनामुक्त गर्न आदेश
शर्मालाई लाग्ने कानुन यी पूर्वमन्त्रीलाई किन लाग्दैन ?